Deepin 20.2 inosvika neLinux 5.11 uye yakavakirwa paDebian 10.8 | Linux Vakapindwa muropa
Mwedzi mitatu yapfuura takapa nhau kuti isu tiri kuzodzokorora nhasi, asi neyakagadziridzwa ruzivo. Ndokunge, kana iyo vhezheni yapfuura yeino inokwezva uye inoshanda sisitimu yekushandisa yakasvika yakavakirwa paDebian 10.6, maawa mashoma apfuura ivo vaparura Deepin 20.2, kugadzirisa izvo izvo zvino zvakavakirwa paDebian 10.8. Haisi iyo yazvino vhezheni yeDebian, kubvira 10.9 yakasvika svondo rapfuura, asi zvine musoro kana tikatarisa kuti chitsva chitsva cheDainin Linux chasvika chete mazuva mashanu gare gare.
Izvo zvavakagadzirisazve, uye, senge zvese, zvakafambira mberi kuDebian ndiyo kernel, ichienderera ichipa senge sarudzo Linux 5.11, yakanyanya kukwira-ku-danga yakagadzikana vhezheni. Asi iyo nhau haimire chete mune izvo zvatisingaone. Uye ndeyekuti Deepin Linux ndiyo inoshanda sisitimu, asi zvakare desktop ine seti yese yekushandisa. Zviri mune izvi zvekupedzisira zvikamu pavakaisa nyama yese pane iyo grill, pamwe nekuvandudza kunobva kubva kune aesthetics kuenda kune zvitsva zvinonakidza zviitiko.
Nhau dzakakurumbira dzeDepin 20.2
Kubva paDebian 10.8.
Kernel kusarudza pakati peLinux 10 LTS kana Linux 5.11, ese akaisirwa default.
Kuvandudzwa kwemaneja wefaira, iyo inogona kudzikisira zita remadhisiki, yakagadziridzwa yakazara-zvinyorwa zvekutsvaga, ikozvino inoratidza ruzivo rwakajeka kana yakagadziridzwa mashandiro emafaira.
Iyo disk app ikozvino inotsigira FAT2 uye NTFS uye inogona kutarisa nekugadzirisa zvikamu zvakashata.
Iyo email application inotsigira kutumira kwakarongwa maemail, izvozvi inobvumidza kuwedzera zvinyorwa uye yakavandudza mitemo.
Iyo mimhanzi app yaisanganisira mabasa ekudzora mimhanzi, yakagadzirisa mafaira nzira uye maonero ezviridzwa.
Iyo vhidhiyo yekushandisa ikozvino inotsigira iyo AVS2 fomati uye inokutendera iwe kudzora yekutamba kumhanya.
Iye anotarisa mufananidzo ikozvino anotsigira mafomati eTIF neTIFF.
Wokudzivirira maneja izvozvi anogona kubata nekutora kurodha pasi.
Mabasa matsva muiyo skrini app, senge iyo inomira uye inochengetedza iyo vhidhiyo otomatiki painomisa kushanda kwehwindo kana kuti ivo vakawedzera mapfupi matsva.
Zvakawanda zvakagadziridzwa mune mamwe ese maapplication, anowanikwa mune yekuburitsa noti iyo yakabatana pakutanga kwechinyorwa chino.
Kuvandudzwa kwekuita uye ruzivo rwevashandisi zvakajairika.
Deepin 20.2 ikozvino iripo en Iyi link. Sekutaura, kunyanya kune avo vasingavimbe neChinese, ndinoziva kuti kune anopfuura imwe chete, kutaura kuti kune mamwe masisitimu anoshandisa Deepin, senge UbuntuDDE, remix iyo inoda kuve yepamutemo kuravira. Pachishoma, ini ndinokurudzira kuti iwe uzviedze kunyangwe mumuchina chaiwo, kunyange ini ndisiri mutoro kana iwe ukasarudza kuchinjira kuDainin nekuda kwekunakidza kwazvinoita uye kwete zvinhu zvese zvichifamba mushe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Deepin 20.2 inosvika neLinux 5.11, yakavakirwa paDebian 10.8 uye kugadzirisa mukuita uye ruzivo rwevashandisi
Linux Lite 5.4, ine mwero yekuvandudza inoitika kuve yakavakirwa paUbuntu 20.04.2 uye inogadziridza mapakeji